Suuqa kala iibsiga Maanta: Waqtiga Kylian Mbappe uu ku biirayo kooxda Real Madrid oo la shaaciyay, Anthony Martial oo go’an ka qaatay ka tagista Man United iyo Qodobo kale | Warkii.com:-world news today for international news and videos from Europe, Asia, Africa, the Middle East and the Americas.
Home Ciyaaraha Suuqa kala iibsiga Maanta: Waqtiga Kylian Mbappe uu ku biirayo kooxda Real...
Suuqa kala iibsiga Maanta: Waqtiga Kylian Mbappe uu ku biirayo kooxda Real Madrid oo la shaaciyay, Anthony Martial oo go’an ka qaatay ka tagista Man United iyo Qodobo kale
Real Madrid ayaa ku guuleysan weyday dalab cusub oo 220m euro ah (£ 189m) oo ay ku doonaysay weeraryahanka Paris St-Germain Kylian Mbappe, lakin 22 jirkaan ayaa si xor ah xagaaga dambe ugu biiridoona. (Goal)
Weeraryahanka reer France ee kooxda Manchester United Anthony Martial, oo 25 jir ah, ayaa iska diiday fursad uu ugu biiri lahaa Lyon daqiiqadii ugu dambaysay maalintii ugu dambaysay. (Mirror)
Si ka duwan Martial, United Ciyaaryahanka khadka dhexe Donny van de Beek, oo 24 jir ah, ayaa doonayay inuu ka tago Old Trafford lakin waxaa laga diiday in uu u dhaqaaqo kooxda Everton . (AD)
Atletico Madrid ayaa dib u soo celisay dalab 18 milyan oo ginni ah oo ay ku dooneysay daafaca midig ee England Kieran Trippier, oo 30 jir ah, kaasoo uga yimid Manchester United , taasoo ku dhalisay kooxda Premier League inay hor istaagto 22 jirka reer Portugal Diogo Dalot inuu u dhaqaaqo Borussia Dortmund . (dailyStar)
West Ham ayaa dooneysay inay Manchester United kala soo saxiixato xiddiga qadka dhexe ee reer England Jesse Lingard, oo 28 jir ah, ka dib markii uu amaah ku guuleystay xilli ciyaareedkii hore, laakiin ma aysan dooneynin inay la kulanto 25 milyan ginni kooxda Old Trafford. (Talksport)
Newcastle ay ku guuldareysatay in ay isku day inay la soo wareegto ciyaaryahanka khadka dhexe ee hore ee England Under 21-Hamza Choudhury, 23 jir ah kana tirsan Leicester ka dib wadahadalo dhexmaray labada kooxood ay burburiyeen. (Sky Sports)
Rayo Vallecano ayaa la soo saxiixaneysa weeraryahankii hore ee Manchester United iyo Chelsea Radamel Falcao, oo 35 jir ah, isagoo qalinka ku duugi doona heshiis labo sano ah. Xiddiga reer Colombia ayaa si guul leh ugala xaajooday joojinta qandaraaskiisa kooxda Turkiga ee Galatasaray wuxuuna diiday dalabyo dhowr ah oo uga yimid kooxaha Talyaaniga si uu ugu biiro kooxda La Liga. (Marca)
Olympique Lyon ayaa xaqiijisay maalintii ugu dambeysay ee ay la soo wareegtay daaficii hore ee Bayern Munich Jerome Boateng oo beeca xorta ah kula soo wareegay. 32 jirkaan ayaa kooxda reer France ugu biiraya heshiis labo sano ah. (Sun)
Xiddiga reer France Houssem Aouar, oo 23 jir ah, ayaa sii ahaan doona ciyaaryahan Lyon inkastoo ay xiiseynayaan Arsenal, Tottenham iyo Real Madrid . (dailyMail)
Crystal Palace ayaa ku rajo weynayd inay la soo saxiixato weeraryahanka Arsenal Eddie Nketiah, oo 22 jir ah, laakiin waxay ku heshiin waayeen heshiiska shaqsiga ah ee xiddiga 21 jirada England, kaasoo sii joogi doona Emirates. (dailystar)
Previous articleTaalibaan oo digniin horleh soo saartay – maxaa soo kordhay?
Next articleMadaxtooyada oo Cali Guudlaawe Ku Cadaadinaysa In uu Liiska Ka reebo Musharax Muuse Suudi 01/09/2021